ဒါဟာလေ, တူညီညှိခြင်းနှင့်မှောင်မိုက် Transparency aerated "ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး" ခညျြးနှီးဆှေးနှေး "စုတ်ဖြစ်ပါသည်။
3 ဇန်နဝါရီလ 2018 Belz စပိန်နိုင်ငံရေး, Sociedad 1
စပိန်အတွက်, ဂုဏ်ယူစွာကိုယ်စားပြုပါလိမ့်မယ်မဟုတ်မှန်လျှင်, မကြာမီပြုလုပ်တက်မမြင်ရတဲ့နံရံများကဆင်းခေါက်ဖို့အစဉ်အမြဲနှောင့်ယှက်သဖြင့်ဆိတ်ကွယ်ရာကိုက်တက်အဆုံးသတ်, ကြှနျုပျတို့နေဆဲမခေါ်နိုင်ဘယ်ဟာ Espana လာသောအခါအချိန်ထဲကနေအချိန်ကြောင့်တစ်ဦးနေအိမ်, အစားအစာ, အခွင့်ထူး, အိုလံပစ်နှင့်အနီရောင် shared တဲ့သူနှစ်ယောက်ထက်ပိုသန်းနိုင်ငံသားများ မှလွဲ. ။ ဒီကပြင်သစ်မသာ၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောဖန်ဆင်းရှင်ခဲ့သောအာဏာရှင်စနစ်မှအပေါ်ကိုရွှေ့ဖို့အချိန်အခါကိုစို့ဖို့စဲပင်ပုပ်, သမိုင်း၏အနံ့အရာအားလုံးကိုငြင်းပယ်, ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုကြီးမားသောပြဿနာလည်းမရှိတားဆီးမထားဘူး တစ်ဦး revanchism Totem ၏ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်အတူအချို့သောတစ်ဦးတည်း, အခြားသူများကိုစောငျ့သောကံကြမ္မာညွှန်ပြရပ်တန့်ရန်, စစ်အစိုးရမှနောက်လိုက်များစွာကိုသန်းပေါင်းများစွာအမည်စာရင်းတင်သွင်းဖို့ရှိခြင်းနေရာတိုင်းမဟုတ်ဘဲဂုဏ်သိက္ခာထက်တာဝန်များမျှဝေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြလို့ နှင့် tabu ။
ဒါဟာအာဏာရှင်များ၏ကြေကွဲဖွယ်ဒဏ္ဍာရီနေထိုင်စဉ်ဆေးကြောဖို့အဘယ်သူမျှမအခါသမယမဟုတ်သလို Audacity ခဲ့သောဖုန်, ဒါကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာပြီးနောက်, aerating များအတွက်မျှတမှုမေ့လျော့၏သင်္ချိုင်းမှာရပ်တန့်ဖို့အမြင့်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါသည် Francisco က Francoပုံအဘယ်အရာနေဆဲ "အမြတ်အစွန်း" အတွက်ချောင်းကိုပေးပြီးအရည်ရွှမ်းဖရဲသီးအဖြစ်ဖွင့်လှစ်သော "piñata" အဖြစ်ပြုလုပ်ထားရန်အနေနဲ့ဆင်ခြေယနေ့ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့် sine ကျနော်တို့သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံတော်မူသောအားဖြင့်နာကျင်နှင့်ခဲသောကျောက်သေဆုံး dramatize ထာဝရပေးနေရတာကိုနာမည်ကျော် "caudillo" ပါ။ ထိုကဲ့သို့သော harangues ၏လုံလောက်စွာ, နှစ်ဦးစလုံးရိုက်ချက်လေကြောင်း compressed, ရည်ညွှန်းအသုံးပြုဤမျှလောက်များစွာသော "Fascio" ကျနော်တို့ဖြစ်လျှင်ပဲ "ruffians" နှင့် "sorayazos" အကြားအတိုင်းလိုက်နာအဖြစ်သူတစ်ဦး hemicycle အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုယ်စားပြုသည့်နိုင်ငံရေး insignes ၏နှိုင်းယှဉ်မကျေနပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသင့်ပါတယ်မကြာမီတစ်ဆပ်ကပ်အဖြစ်စဉ်းစားပါလိမ့်မည်အကြောင်း, ခံတွင်းကိုဖြည့်ဖို့, သူတို့ကသာပျံ့နှံ့နေတဲ့နေကြတယ် လေဟာနယ်ကောင်းကင်ဘားဆန့်ကျင်ရန်မအငြင်းပွားမှုများဖြေဆိုရန် "ဟူသောစကားလုံးများ၏ sicarios" သူတို့ပါးစပ်ဖွင့်အခါတိုင်းခုန်ကွောကျရှံ့သောအဘို့ဆပ်ကပ်လူပြက်။
ဘာမှနှင့်အတူသဘောတူနှင့် lbertad စံနိုင်မှတရားမျှတရဲ့, ဒါပေမယ့်အများဆုံးသည့်အခါအပြည့်အဝနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုအဖွင့်လှစ်ခဲ့သောကွာဟမှုကိုတှနျးလှနျနှင့်ဖြည့်စွက်ရန်တပ်ဖွဲ့များ join ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တပါးဘာမျှမနေသောဘယ်တော့မှမ သူတို့နေဆဲလိုအပ်ပါကအမျိုးသားရေးအခွင့်အလမ်းအသစ်ကအလံလျှော့ချ မှလွဲ. ဒဏ်ချက်မှလာမယ့်မရှိဘဲတစ်ဦးချင်းစီကတခြား stabbing နေကြသည်။
ဒါဟာဆင်ခြေပျောက်ကွယ်သွားနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများလုပ်ကျွေးသောထိုအရပ်၌ကျက်စားကြကုန်အံ့ရန်တောင်းဆိုမှုသည်။ ယင်းသူတို့၏အနေအထားကိုသက်သေပြသို့မဟုတ်ပင်အန္တရာယ်အကဲဖြတ်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်မဟုတ်သည့် Castor ကိုခေါ်ဖာရေကြောင်းမျှော်စင်၏ဆုံးရှုံးမှုနှင့်၎င်း၏အကျိုးဆက်များကိုဖုံးလွှမ်းရန် 1,75 €အတွက်တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်းဓာတ်ငွေ့ဥပဒေကြမ်းနဲ့တူစိုးရိမ်ဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောအမှုအရာရှိပါတယ်, orographic ။ နှင့်ဤဥပမာတစ်ခုထားရန်, ငါတို့သည်တရားဥပဒေဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်များအတွက်ကျနော်တို့ပုံကတာဝန်မယူတဲ့သိုလှောင်မှုဘူတာရုံ၏ပျက်ကွက်မှုအတွက်ပေးချေရန်ရည်ရွယ်သည့်အမည်များ, နေရာချထားဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စှပျစှဲလက်ချောင်းများညွှန်ပြခြင်းနှင့် directing ကျနော်တို့စစ်ကြောစီရင်တော်မူနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက် သို့မဟုတ်ပါသေးကွာရှာနေကြသူဖြစ်ရမည်။ ငါတို့သည်ထပ်မံဆန္ဒပြခြင်းမရှိဘဲအကျင့်ပျက်ခြစားမှုများနှင့် prevarication ဖြစ်စေသောညံ့အလုပ်, မိဖုရားဒီမိုကရေစီနေဆဲ, ဆဲကဝန်ခံမပါဘဲထင်တဲ့သူကိုအကျေးဇူးတင်ရသောအခါနည်းနည်းဘာမျှဖို့ငါတို့သည်လာကြပြီနိဂုံးသို့ရောကျသောအခါရဲ့ အဘယ်သူမျှမကံမကောင်းသည် Transparency ဥပဒေမှ intervenors ငါတို့ရှိသမျှသည်အခြားသူများကိုနောက်ထပ် ado မပါဘဲတစ်နေ့နေ့မှာပေါ်လာကြောင်း, လက်ျာလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။
10 မှ 2018 ဇန်နဝါရီလ 15: 10
အထောက်အထားစပိန်အမွေဥစ္စာဘို့ဝေးခံစားချက်ထက်ကျော်လွန်သွားသည်ကောင်းနှင့်အများပြည်သူအသိပညာမဤမျှလောက်ခြားပြီး (ကစိတ်ပျက်ဖွယ်ရာတစ်ခုခုကိုဖြစ်ပါတယ် "ဟုအဆိုပါကော်ဇောအောက်မှာပုံပြင်လှည်း" နှင့်သူမ၏လျစ်လျူရှုဆက်လက်မနိုင်) ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ စီမံကိန်းများအတွက်သကဲ့သို့မသူအပေါင်းတို့သည်သင်တို့မူကား (သိသာတဲ့သူတို့အရှင်အားလုံးအကျိုးအမြတ်, ကျွမ်းကျင်သူများထံမှယခင်လေ့လာမှုများရှိရမည်) တစ်ဦးကောင်းအနာဂတ်ရှိသည်ဖို့ကြိုးစားမဝေဖန်လို့မရပါဘူး။
13 နိုဝင်ဘာလ 2018 0
ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်ကျေးဇူးတင်စကားချို့တဲ့ပေမယ့်ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံတို့အကြားကဒီartículoTweetAlarma Share များနှင့်နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးပြင်ပ hard core ကိုများအတွက်အထင်အမြင်သေးဆက်ဆံကြသည်ဘယ်မှာဆင်းရဲမွဲတေခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ဟေတီ, [ ... ]
6 ဒီဇင်ဘာလ 2017 20
ဒီ Menudo artículoTweet¡ဗက်လင်မြို့ရွေးကောက်ပွဲ Share! Marta Rovira ဈ Verge (ERC) ခန့်မှန်း 32 နှစ်ပေါင်း 40% ရှေ့နေ [ ... ]